कोरिया जाने कामदारको सीप परीक्षण एक वर्ष पछि धकेलियो - dsnews
१६ साउन, काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारका लागि सीपमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्न एक वर्ष ढिलाई हुने भएको छ । कोरियाले सन् २०१९ देखि नेपालबाट कामदार लैजाँदा सीप र भाषा दुबैलाई परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । तर, नेपालको कमजोर तयारीले थप एक वर्ष ढिलो हुने अवस्था आएको हो । नेपालले प्राविधिक तयारी गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै सन् २०२० बाट मात्रै सीपमा आधारित भाषा परीक्षा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
भवन तयार गरिँदै
यो भवनको शिलान्यास आउँदो साउन २५ गते गर्ने र भदौबाट निर्माण थाल्ने तयारी छ । ६ तलको यो भवन झण्डै ११ करोड रुपैयाँको लागतमा नेपाल सरकार आफैंले बनाउनेछ । भवनका प्रत्येक तलामा कोरियाले ३५÷३५ वटा कम्प्यटर राख्नेछ । सीपमा आधारित परीक्षा सुरु भएपछि यही सीभीटी हलमा नेपाली युवाले जाँच दिनेछन् । यो भवन वि. सं. २०७६ को भदौसम्म तयार गरिसक्ने लक्ष्य छ । त्यसमा फर्निसिङ र प्राविधिक तयारी गर्न थप ६ महिना लाग्ने भएकाले सन् २०१९ बाटै सीपमा आधारित परीक्षा गर्न गाह्रो पर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
शाखाका एक अधिकारी प्राविधिक रुपमा २०१९ बाट सीप जाँचेर कोरिया पठाउन गाह्रो भएको स्वीकार्छन् । कोरियाले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भाषासँगै कामदारको सीप र शारीरिक स्वरुपको पनि परीक्षण गर्नेछ । भाषामा पास भएकाहरुले कोरिया जान अन्तवार्ता पनि अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने छ । कोरियाको मानव संशाधन विभागले अब कामदार छनोट प्रणालीमा अंक पद्धति लगाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
के हो सीप परीक्षण ?
सीपमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू भएपछि अहिलेको २ सय पूर्णांकको सुनावाई र लेखाइको परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरेर नयाँ स्वरुप दिइनेछ । अब उसले दाबी गरेको सीप परीक्षण गरेर मात्रै कामदारलाई विदेश लगिनेछ । जस्तो उत्पादनमुलक समूहको स्टिल फिक्सङ समूहमा जाने गरी आवेदन गरेका कामदारले भाषा पास भएपछि सीपको परीक्षा दिनुपर्नेछ । कोरियाले नयाँ अंक प्रणालीमा अब भाषा परीक्षामा सय र सीप परीक्षणमा पनि सयकै पूर्णांक कायम गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाका प्रवक्ता शोभारक भण्डारीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्मको तयारीअनुसार सन् २०२० देखि ईपीएसमा कागजी परीक्षा प्रणालीसमेत हट्नेछ । पूर्ण रुपमा कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा हुनेछ । जसलाई कम्प्युटर चलाउन जानेकाहरुले मात्रै दिन सक्छन् । नेपालसहित १६ देशबाट कामदार ल्याइरहेको कोरियाले अन्य देशमा यस किसिमको प्रणाली यसअघि नै लागू गरिसकेको छ । श्रोत:अन्लाइनखबर
Previous एकै गाउँमा साढे २ करोडको गोलभेँडा उत्पादन
Next सेञ्चुरी कमर्सियलको हकप्रद आजबाट